Nin Ingiriis ah oo wax uu sameeyay ku hantay qalbiyada shacabka waddan Islaam ah | Biyoguurenews.com
Home Wararka Nin Ingiriis ah oo wax uu sameeyay ku hantay qalbiyada shacabka waddan...
Nin Ingiriis ah oo wax uu sameeyay ku hantay qalbiyada shacabka waddan Islaam ah
Markuu Kareef Daniel Abdullah ka baxo albaabka gurigiisa ee caasimadda Malaysia, dadka ayaa ku soo jeesanaya iyagoo ku dhawaaqaya naaneystiisa.
Dadka waxay dhahaan ‘Fiiri, eeg, waa Mat Dan!”, sida ay sheegtay hooyadiis, waxayna intaas ku dartay in qaar ka mid ah dadka ku xooma ay ku dhiirradaan inay weydiistaan inuu sawirro la galo.
Mat Dan wuxuu nin caan ah ka yahay dalka Malaysia, waxaana taas sabab u noqon kara sameynta barnaamijkiisa weynaa ee ka hadla safarrada, qabashada barnaamijka subaxlaha ah ee Raadiya ama xitaa sawirradiisa oo ka muuqda boorarka waaweyn ee wax lagu xayeysiiyo.
Caannimada waddo caadi ah uma uusan soo marin ninkan u dhashay dalka Ingiriiska ee la yiraahdo Daniel Tyler.
Wuxuu ku koray magaalada dabaqadda dhexe ee Cheltenham oo ku taalla dalka ingiriiska.
Barbaarinta Dan, kama aysan duwaneyn kuwa caadiga ah.
Iskuulka aad ma uusan u jeclaan jirin, balse wuxuu ku firfircoonaa ciyaaraha cricket-ka ku matalayay tartanka dhalinyarada ee Gloucestershire.
Markii uu 15 jirka ahaa wuu iska daayay ciyaaraha cricket-ka wuxuuna u wareegay dhinaca fanka.
Wuxuu ku dhacay imtaxaanka kulliyadda, waxaana aalaaba lagu arki jiray baararka iyo dukaamada dharka iibiya.
Sannadkii 2008-dii, Dan wuxuu keydsaday lacag badan si uu ugu safro Koonfurta -bari ee qaaradda Aasiya, isagoo la socday saaxiibbadiis.
Markii uu dib ugu noqday UK, wuxuu go’aansaday inuu safar kale ku aado Aasiya, dhammaadkii isla sannadkaas.
Waxba kama uusan ogeyn in go’aanka soo laabashadiisa uu baddali doono guud ahaan noloshiisa.
Dan wuxuu isu diyaariyay inuu aado jasiiradda yar ee Pulau Kapas, taasoo ku taalla xeebta bari ee dalka Malaysia. Intuu waqti la qaadan lahaa dalxiisayaasha reer galbeedka, Dan wuxuu go’aansaday in uu dhex galo dadka deegaanka ee jasiiraddaas ku nool.
Waqti badan kuma qaadan inuu barto luqadda degaanka looga hadlo, wuxuuna bartay Bahasa Malay, oo ah luqadda koobaad ee looga hadlo Malaysia.
Laakiin safarkii uu dib ugu noqonyay Kuala Lumpur, waxaa luqaddiisa fahmi waayay qof dukaan iibinayay. Waxaa la yaab ku noqotay in lahjaddii uu baranayay ay ahayd Terengganu – taasoo ay ku hadlaan qiyaastii hal milyan oo qof oo deggan gobolka Terengganu oo kaliya.
Markii hore wuu niyad jabay. “Waxaan noqday sida: “in xubnaha jirkeyga lakala jari lahaa haddii meel kale aan aadi lahaa,” ayuu yiri. Balse sida lama filaanka ee uu ku bartay luqadda Malay ayaa ka dhigtay sida hadda uu yahay.
Hadal ayaa billowday oo la xiriira Dan iyo gobolka Terengganu iyadoo uu faafay hadalka ah in nin Ingiriis ah uu ka helay luqaddooda.
Balse ardey ka tagay Kuala Lumpur ayaa si sir ah muuqaal uga duubay Dan oo ku hadlaya Terengganu, muuqaalkaasna waxaa YouTube-ka ka daawaday boqollaal kun oo qof oo reer Malaysia ah.
Waxaa u timid koox ka socota TV ku yaalla caasimadda, waxayna weydiiyeen haddii uu doonayo inuu isku dayo inuu hor istaago Kaamerada. Kadib markii ay ogaadeen inuu daadihin karo barnaamij, waxay siiyeen qeyb u gaar ah idaacadda oo looga hadlo safarrada.
Markii uu barnaamijka hawada galay, Dan noloshiisa ayaa habeen qura isku beddeshay. Hadda meel walbo oo uu tago waalaga garanayaa, isagoo boggiisa Instagram-kana ay illaa 838,000 oo taageero ay ku taxan yihiin.
Wuxuu billaabay bandhig isaga u gaar ah oo cunto karin ah, inkastoo uusan isagu karin karin raashinka.
Wuxuu marti geliye ka noqday barnaamij ka baxa idaacadda Mnis Fm, haddana waa mid markastaa laga fisho waxyaabo xiiso leh oo wada sheekeysi ah.
Intii uu Malaysia ku sugnaa, Dan wuxuu sidoo kale qaatay diinta Islaamka, wuxuuna halkaas ku guursaday haweeney muslimad ah.
Inkastoo uu leeyahay taageerayaal badan, haddana waxaa jira dad dhaleeceeya, oo aan wax weyn u arkin in isagoo ajnabi ah uu bartay luuqadda waddankaas.
Balse isagu wuxuu aaminsan yahay inuu ka duwan yahay dadkaas.
“Dad badan ayaa sheega inay arkeen ajaanib Malaysia tagtay oo luuqadda Malay-ga ku baratay muddo gaaban oo 2 ama 3 bilood ah, laakiin anigu waxaan uga duwanahay in kulligood midna uusan sideyda caan ugu noqonin arrintan”, ayuu yiri Dan.
Dan wuuu qaddariyaa dadka dhaleeceeya, laakiin wuxuu aad u necebyahay dadka shakiga ka muujiya islaamnimadiisa.
Inkastoo uu si rasmi ah u dagay Malaysia, haddana wuxuu sanad walba sameeyaa safar uu dib ugu laabanayo waddankiisa hooyo ee Ingiriiska.
Previous articleJabuuti oo sheegtay in aysan ka hari doonin tartanka ay kulan jirto Kenya ee Golaha Amniga
Next articleMadaxwaynaha Somaliland Oo Ka Warbixiyay Socdaal Uu Ku Joogo Jabuuti